शुक्राणु र वीर्य फरक कुरा हुन् - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
शुक्राणु र वीर्य फरक कुरा हुन्
ब्रिटिस जर्नल अफ स्पोर्ट्स मेडिसिनमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिसाता २० घण्टाभन्दा बढी टेलिभिजन हेर्ने पुरुषको शुक्राणुको संख्या आधाले कम हुने उल्लेख छ । १८ देखि २२ वर्षका युवाहरूमा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको उक्त अध्ययनअनुसार प्रतिसाता १५ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी शारीरिक अभ्यास गर्ने पुरुषहरूमा अन्य पुरुषको दाँजोमा ७३ प्रतिशत बढी शुक्राणु हुन्छ । कतिपय मुलुकमा गरिएको एउटा अर्को अध्ययनअनुसार हालैको दशकमा वयष्क पुरुषमा शुक्राणुको गुणस्तर घट्न थालेको देखिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले यसको कारण ठ्याक्कै भन्न नसके पनि पछिल्लो दशकमा सहरी नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई जिम्मेवार मानेका छन् ।
चिन्तामाथि थप चिन्ता भनेजस्तै तातो वातावरण, गर्मी ठाउँ, लामो दूरीका गाडी चलाउने चालकहरूमा पनि शुक्राणु कम भएको पाइन्छ भने मोबाइललाई पुरुष लिङ्ग नजिकै अर्थात् पाइन्टको खल्तीमा राखेको खण्डमा शुक्राणुको संख्या कम हुन सक्ने तथ्य कतिपय अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
एचआईभी र एड्स फरक कुरा हुन् भने जस्तै शुक्राणु र वीर्य पनि फरक कुरा हुन् । वीर्यमा हुने विभिन्न तत्वहरूमध्ये शुक्राणु पनि एक हो । सन्तान उत्पादन गर्न सक्षम हुन वीर्यमा निश्चित संख्यामा शुक्राणुको उपस्थिति हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त शुक्राणुको बनावट तथा चाल पनि निश्चित मात्रामा हुनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रतिमिलिलिटर वीर्यमा शुक्राणुको संख्या २ करोड वा त्यसभन्दा बढी हुनुपर्छ । यसैगरी ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शुक्राणुको चाल र बनावट सामान्य हुनुपर्छ । यसका साथै वीर्यमा एसिड फोस्फेटेज, जिंक तथा फ्रुक्टोज पनि निश्चित मात्रामा हुनुपर्छ ।
मौसम अनुसार तथा स्खलनको अवस्थाअनुसार वीर्य बाक्लो वा पातलो हुन सक्छ । त्यसो त शुक्राणु अण्डकोषमा निर्माण भै इपिडिडाइमिस वा सेमिनल भेसिकल (वीर्य थैली) मा भण्डारण हुन्छ, जुन शारीरिक सम्पर्क वा हस्त मैथुनका दौरान उत्तेजित लिङ्गबाट स्खलित हुन्छ ।
शुक्राणु तथा वीर्यमा आउने परिवर्तन एवं खराबीका कारण उत्पन्न हुने नि:सन्तान अर्थात् नपुसंकताका लागि श्रीमान् (वा पुरुष साथी) को वीर्य विशेष खालको पाइप (क्याथेटर) को माध्यमबाट श्रीमती (वा महिला साथी) को पाठेघरमा राखिदिनुपर्ने, कृत्रिम गर्भाधान (टेस्ट ट्युब प्रविधि) गर्नुपर्ने वा अर्कै
दाताको वीर्य वा शुक्राणु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
के हो वीर्य ?
सामान्यत: एकपटक स्खलन हुँदा ३ देखि ५ मिलिलिटर वीर्य निस्कन्छ र यसमा शुक्रकीटको संख्या ४ देखि १२ करोडसम्म हुन्छ । वीर्यको सानो अंश मात्र शुक्रकीट हुन्छ । मानव शरीरमा वयस्क डिम्ब शरीरको सबैभन्दा ठूलो कोष हो भने शुक्रकीट सबैभन्दा सानो कोष हो । शुक्राणुको प्रारम्भिक अवस्थाबाट पूर्ण वयष्क शुक्राणु बन्ने प्रक्रियालाई मेडिकल भाषामा स्पर्मेटोजेनेसिस भनिन्छ । मानिसमा यो प्रक्रिया पूरा हुन करिब ६१ दिन लाग्छ ।
सूक्ष्म दर्शक यन्त्रको मद्दतले मात्र देख्न सकिने परिपक्व शुक्रकीट चेपागाँडा आकारको हुन्छ । बनावटका हिसाबले शुक्राणुलाई टाउको र पुच्छरमा बाँडिन्छ भने पुच्छरलाई पनि घाँटी, मध्यभाग, मुख्य भाग तथा अन्त्यको भाग गरी थप चार भागमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
यौन सम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्य स्खलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही महिलाको पाठेघर हुँदै पाठेघर र डिम्बवाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बसँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकले मात्र निषेचन गर्न सक्छ । यसरी शुक्रकीट र डिम्ब मिलन भै बनेको कोष २–३ दिनपछि पाठेघरमा बस्न आउँछ र क्रमश: भ्रूण अनि गर्भस्थ शिशुमा विकसित हुँदै जान्छ । त्यसैले वीर्यमा शुक्रकीट नै छैन भने गर्भ रहन सक्दैन ।
वीर्यमा पाइने शुक्रकीटको उत्पादन अण्डकोषमा हुन्छ । अण्डकोषमा हुने अति नै मसिना एवं गुँडुल्किएका नलीमा निरन्तर रूपमा शुक्रकीट बन्ने प्रक्रिया चहिरहन्छ । किशोरावस्थामा पुगेपछि शुक्रकीट उत्पादन हुने तथा वीर्य बन्ने प्रक्रिया जीवनभर चलिरहन्छ ।
अण्डकोष नै यसको थैलीमा नझरे, अण्डकोषको विभिन्न खराबी, अण्डकोषमा कुनै चोटपटक, संक्रमण वा जन्मजात खराबी वा अन्य चोटले हुने संरचनागत खराबीले शुक्रकीट उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । हार्मोनको मात्रामा गडबडी, वंशानुगत खराबी, रेडियोथेरापी (विकिरण) तथा कतिपय औषधिले पनि शुक्रकीटको उत्पादनमा प्रभाव पार्न सक्छन् । यसका साथै अण्डकोषबाट वीर्य आउने नलीमा हुन सक्ने खराबीले पनि वीर्य स्खलनमा समस्या सिर्जना गर्छ ।
उच्च रक्तचाप यौन उत्तेजना
दुर्गा स्वाँरको नबिझाउँने कुरा
बाँझोपन र पुरुष शुक्रकिट असार २३, २०७५
डा. सुमनको सल्लाह असार १५, २०७५
उच्च रक्तचाप र गर्भ धारण जेष्ठ १७, २०७५
परिवार नियोजनको कुन साधन प्रभावकारी जेष्ठ ९, २०७५
गन्धको भूमिका जेष्ठ २, २०७५
लिंग उत्तेजित नहुने समस्या वैशाख २६, २०७५
यौनसम्पर्क कन्डम प्रयोग र आकस्मिक गर्भ चैत्र २८, २०७४
गर्भ तथा महिला स्वस्थ्य चैत्र १५, २०७४
महिनावारीमा धेरै पेट दुख्ने केटीको शिशु हुँदैन चैत्र १०, २०७४
गर्भनिरोधक साधन र महिला स्वास्थ्य फाल्गुन २५, २०७४